शिल्पालाई पनि पक्राउ गर्न घरमै पुग्यो प्रहरी, उनका पति राज कहिले छुट्छन् ? « Gaunbeshi
शिल्पालाई पनि पक्राउ गर्न घरमै पुग्यो प्रहरी, उनका पति राज कहिले छुट्छन् ?
प्रकाशित मिति : 12 August, 2021
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । उनलाई अ श्लि ल चलचित्र निमाएण गरेको अभियोग लागेको छ । यता अभिनेत्री शिल्पा पनि अप्ठेरोमा परेकी छन् । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी शिल्पाको घरमै पुगेको छ । शिल्पा र उनकी आमालाई ठ गी को आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्न लागेको हो ।
श्रीमानको घटनामा सोधपुछकै क्रममा रहेकी शिल्पालाई लखनउकी एक महिलाले करोडौं ठ गी गरेको आरोप लगाएकी छन् । ति महिलाको आरोपपछि मुम्बई र युपी प्रहरीले छानबिन सुरु गरेको छ । बुधबार दिउँसो अभिनेत्री शेट्टीको जुहुस्थित घरमा मुम्बई र युपी प्रहरी पुगेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छाएको छ ।
तस्बिरमा प्रहरीका केही अधिकारीहरु शिल्पाको बंगलाको भित्र गइरहेको देखिएको छ । यसैबीच, केही प्रहरी अधिकारी सूचना पनि साथमा लिएर आएका भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ ।
लखनउका विभूतिखण्ड प्रहरी स्टेशनमा ‘ओमेक्स हाइट्स’ निवासी ज्योत्सना चौहानले र हजरतगंज थानामा रोहित विर सिंहले शिल्पा शेट्टी र उनकी आमा सुनन्दा शेट्टीको विरुद्ध ठगी गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दर्ता गराएका छन् । हजरतजंग प्रहरीले सोधपुछका लागि दुवैलाई एक महिनाको सूचना जारी गरिदिएको छ ।
‘आयोसिस स्लिमिंग स्किन सैलुन र स्पा वेलनेस सेन्टर’ को ब्रान्च खोल्ने नाममा शिल्पा र सनन्दाको कम्पनीका मानिसहरुले दुई व्यक्तिहरुसँग करोडौँ ठगी गरेको आरोप लागेको हो । पैसा लिएर अभिनेत्री र उनकी आमाले आफ्नो कसम पूरा नगरेको र कम्पनी ओपनिङमा समेत शिल्पा नगएको उनीहरुमाथि आरोप छ ।
विभूतिखण्ड प्रहरीले सन् २०२० जुन १९ मा यस मामिलाको एफआइआर दर्ता गराएको थियो । यसमाथि कारबाही नभएपछि प्रहरीले सरुवा समेत भएको थियो ।
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आयोसिस वेलनेस सेन्टर नामक एक फिटनेस चेन पनि चलाउँछिन्। शिल्पा शेट्टी यस कम्पनीकी अध्यक्ष हुन्, उनकी आमा सुनंदा निर्देशक हुन्। शिल्पा शेट्टी र उनकी आमाले वेलनेस सेन्टर शाखा खोल्ने नाममा दुई जनाबाट करोडौं रुपैयाँ लिएको आरोप छ। रकम लिएपछि पनि अभिनेत्री र उनकी आमाले आफ्नो वाचा पूरा गरेनन्, प्रतिबद्धता पूरा गरेनन्।
काठमाडौं,जेठ ३० । एस के ईन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा आयोजना हुनगईरहेको मिसेस एण्ड मिस गुरुङ २०२२, सिजन-३
‘प्रेम गीत ३’ हिन्दी भाषामा विश्वभर प्रदर्शन हुने
काठमाडौं । फिल्म प्रेम गीत ३ हिन्दी भाषामा ‘विश्वजितम’ नामले प्रदर्शन हुँदै छ
नित्याशिवाको आवाजमा रहेको ‘थाहा नपाई’ सार्वजनिक
काठमाण्डौं,जेठ २१ | नित्याशिवा र गायक पुरुषोत्तम न्यौपानेको आवाजमा रहेको ‘थाहा नपाई’ गीतको भिडियो सार्वजनिक